Kedụ ihe kpatara nsogbu okpomoku ụwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Narị afọ nke XNUMX na-abụ narị afọ nke abụọ mgbanwe ihu igwe ka okpomoku zuru uwa buru ibu ezigbo egwu abụọ maka ụwa dum. N'okwu nke okpomọkụ gburugburu ụwa, otu ihe na-akpata mụbara ọkara okpomọkụ nke oké osimiri na ikuku ruru ka eke na tumadi dị ka a N'ihi nke omume mmadụ.
na ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọkachamara N'ọhịa, ha ejirila ọtụtụ iri afọ na-amụ ihe a ma gbalịa ịkọ mgbanwe nke okpomoku a ga-akpata uwa niile n'ime afọ ole na ole ma ọ bụrụ na oge ka dị iji kwụsị ndị dị otú ahụ ọdachi nke ahụ na-eyi ndụ dị mkpụmkpụ nke ụwa. Mgbe ahụ, m ga-aza ajụjụ n'ụzọ zuru ezu karị ma mee ka o doo gị anya, kedu ndị bụ ihe na-ebute okpomoku zuru ụwa ọnụ na ihe nwere ike ịpụta na ọkara na ogologo oge.
1 Ihe ndi n’eme ka okpomoku n’uwa n’iru
1.1 Ọrụ anyanwụ
1.2 Mmiri uzuoku
1.3 Mgbanwe ihu igwe
2 Ihe ụmụ mmadụ meworo na-eweta okpomoku ụwa
2.1 Mmụba nke ikuku gas na-emepụta
2.2 Mkpoko osisi
2.3 Fatịlaịza ngafe
3 Kedu ihe na -esi na okpomoku zuru ụwa ọnụ apụta?
Ihe ndi n’eme ka okpomoku n’uwa n’iru
Dabere na imirikiti ndị ọkà mmụta banyere mgbanwe ihu igwe, ụfọdụ ihe na-akpata okpomoku zuru ụwa ọnụ nwere ike ịbụ n'ihi ebumpụta ụwa ma ọ bụ ihe na-akpata ya ihe mmadu mere site na aka ya. N'okwu nke ebumpụta ụwa, anọwo na-atụnye ụtụ na okpomoku zuru ụwa ọnụ nke mbara ala ruo ọtụtụ puku puku afọ. Agbanyeghị, ụdị ihe ndị a adịghị mkpa iji mee ka ndị mgbanwe ihu igwe na mbara ụwa dum na-ata ahụhụ taa nakwa na ha na-ebute ụwa dị egwu.
Otu n'ime ihe okike nke okpomoku uwa dị mkpa karịa na nke ahụ na-enwe mmetụta na-adịghị mma na ahụike nke mbara ụwa n'onwe ya, bụ n'ihi mmụba dị ukwuu na ọrụ anyanwụ na-eme ka usoro ikpo ọkụ dị mkpirikpi. Anyanwụ anyị na-ebuwanye ibu, n'ihi ya, ọ na-ewepụtakwa ụzarị ọkụ nke anyanwụ mgbe ọ na-arụ ọrụ njikọta nuklia. Anyị maara na ụzarị anyanwụ na-emerụ ahụ na-eduhie site na ozone oyi akwa na magnetik ụwa. Otú ọ dị, ha na-enye aka na mgbanwe ihu igwe, ebe akụkụ nke radieshon a na-adị na ikuku echekwara n'ụdị okpomọkụ ma na-eme ka ogo okpomọkụ nke ụwa dịkwuo elu.
Typedị ọzọ sitere n'okike na-ebute okpomoku zuru ụwa ọnụ bụ mmụba na mmiri uzuoku na ikuku nke na - eme ka ọnọdụ okpomọkụ na - abawanye site n'oge ruo n'oge ma na - enye aka na ikpo ọkụ n'onwe ya. Alụlụụ mmiri bụ ikuku griin haus nke na-enwe ike ịnwe okpomọkụ. Ọ na - eme ka ihe na - eme ka mmiri griinụ na ọ bụ n'ihi ikuku mmiri ka anyị nwere ike ịlanarị na ọnọdụ okpomọkụ ndị a maka ntọala nke ndụ.
Nsogbu bụ mgbe ụmụ mmadụ gbanwere akụkụ a nke mmiri ozuzo ma mepụta alụlụ mmiri karịa. Could nwere ike ịsị na nke a bụ otu ihe na-akpata okpomoku zuru ụwa ọnụ nke na-ele anya na aka na eke n'otu oge. Ka ukwuu nke ikuku mmiri nke ikuku, ka ukwuu njide nke okpomọkụ.
Ihe nke ato emeela okpomoku uwa bu ihe anakpo onodu ubochi igwe nke na-agafekarị ụwa na mgbe niile. Usoro ihe ndị a ga-abụrịrị bya eworu anwụ phụ nke eze kpakpando. N'ụzọ nke a, ọ bụrụ na Sun bụ isi iyi nke ike nke na-eme ka ụwa ihu igwe, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na radieshon nke anyanwụ n'onwe ya nwere ọrụ kachasị mkpa na mgbanwe okpomọkụ nke ụwa dum na-eme.
Ihe ụmụ mmadụ meworo na-eweta okpomoku ụwa
Ọ bụ ezie na ihe ndị sitere n'okike na-arụ ọrụ kachasị mkpa na okpomoku zuru ụwa ọnụ nke ụwa, ha bụ ihe na-akpata okpomoku zuru ụwa ọnụ ndị na-akpata mbibi kasịnụ n’ụwa. Otutu ihe mmadu mere bu ihe kariri akpọ griin haus ihe omume mmadu kpatara Nke a na-eme ka griin haus site na nsị nke carbon dioxide ọ bụkwa ya kacha mkpa na-eweta okpomoku n’ụwa taa. Typedị nsị a aghọọla a ezigbo ihe egwu na iyi egwu maka ndụ nke ụwa na ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ọkachamara ji achọ azịza ozugbo iji merie nsogbu ndị dị otú ahụ.
Mmụba nke ikuku gas na-emepụta
Ihe ikuku carbon dioxide a na-emepụta bụ nsonaazụ ọkụ mmanu mmanu fosil. NA bụ na ihe ka ọtụtụ n'ime ọkụ a bụ site na mmepụta ọkụ eletrik na site gas ndị na-eji ụgbọ ala kwa ụbọchị n'okporo ụzọ ụwa. Ka afọ na-aga, ọnụ ọgụgụ ụwa na-abawanye, a ga-agba ọtụtụ ọkụ ọkụ. mmanụ ụgbọala, na-emetụta gburugburu ebe obibi na okpomoku ụwa, na-emetụta oge mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị elu nke ukwuu na-ebute oke nsogbu n ’ụwa niile.
Anyi aghaghi ighota ihe omimi nke ikuku dika ihe nke na agbanwe agbanwe site na ntinye nke gas di iche iche di na mbara igwe. Karịsịa, na CO2, nguzozi abụghị otu mgbe niile, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ihe dị ndụ na-ebu fotoynthesis ma jiri gas a lanarị.
Ihe ọzọ ụmụ mmadụ kpatara na-akpata okpomoku ụwa bụ igbukpo osisi ọtụtụ n'ime oke ọhịa ụwa, na-eme ka ikuku carbon dioxide gbagoro na mbara igwe. Osisi na-agbanwe CO2 n'ime oxygen site na usoro fotoynthesis ma nwee igbukpo osisi na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke osisi dị iji gbanwee CO2 n'ime oxygen. Ihe si na nke a ka ukwuu Ogwe CO2 na mbara igwe, nke na-eduga na mmụba na okpomoku zuru ụwa ọnụ ya mere oke ịrị elu na okpomọkụ.
Mkpochapu osisi na-ewetakwa mbelata nke ihe dị iche iche dị na mbara igwe n'ihi mpekere na mbibi nke ebe obibi nke ọtụtụ ụdị. Ọnụ ọgụgụ nke igbukpọsị osisi anaghị akwụsị ma a na-atụ anya na ka ọ na-erule 2050 ihe karịrị ọkara nke oke ọhịa Amazon ga-emebi.
El eji nri nri na oru ugbo bu otu n’ime ihe kacha mkpa na-eme na-abawanye na nkezi okpomọkụ nke ụwa. Fatịlaịza ndị a nwere ọkwa dị elu nke nitrogen oxides, ihe na-emerụ ahụ karịa carbon dioxide n'onwe ya. Dika onu ogugu mmadu na-abawanye ma na-abawanye, enwere enwewanye nri, ya mere enwere mmụba na ubi a zụlitere ya mere, nke ka ukwuu eji nri n'ime ha.
Mmepụta na inye nri na ọkwa zuru ụwa ọnụ chọrọ owuwe ihe ubi ngwa ngwa nke na-atụgharị n'ụzọ na-enweghị isi nke fatịlaịza, ahịhịa, ọgwụ ahụhụ, fungicides na ihe niile metụtara ịkwalite uto na mmepe nke ihe ọkụkụ. Ọ dị mkpa iche ogologo oge wee malite ịmịpụta ngwaahịa ndị dị na mpaghara nke na-adịghị mkpa ọtụtụ fatịlaịza na ihe ọkụkụ gas na-emepụta n'oge njem dị ntakịrị.
Ihe ikpeazu kpatara na ekpughere banyere okpomoku uwa na aghaghi iburu n'uche methane gas. Nke a na ụdị gas nwere usoro griin haus mmetụta Njirimara ukwuu karịa CO2 n'onwe ya. Methane mepụtara site na decomposition nke ihe mkpofu ala na n'ime ihe niile metụtara isiokwu nri. Organic ihe na ire ere ma na enweghi ikuku oxygen na emeputa methane gas. Igwe a na-abawanye na ntinye na ike ịchekwa okpomọkụ dị oke.
Dị ka ị hụworo ma nyochaa, ha bụ ọtụtụ ihe na-akpata nke na-eme ka okpomoku zuru ụwa ọnụ na-abawanye ma na-etinye ụwa egwu ọkara okwu. Ọ bụ ezie na ihe na-akpata okpomoku zuru ụwa ọnụ nwere mmetụta ha N'ime okpomoku di otua, obu mmadu kpatara iji dozie na obere oge.
Fewbọchị ole na ole gara aga ọ ga-ekwe omume ikwenye na afọ 2015 bụ kacha ekpo ọkụ ugbu nke akụkọ ihe mere eme na mbara ụwa dum. Eziokwu a na-echegbu onwe ya tinyere oge na-arịwanye elu oké ihu igwe ihe ajọ ifufe, oké ifufe, ma ọ bụ ajọ ifufe kwesịrị iwepụ ihe ọmụma n'ọtụtụ n'ime ụwa ụwa iji chọọ ihe ngwọta ozugbo o kwere mee.
N'ịbụ ndị chere ihu n'ọnọdụ a siri ike, gọọmentị nke ike dị ukwuu nke ụwa ga-eme ngwa ngwa ma kwụsị mgbanwe ihu igwe na okpomọkụ gburugburu ụwa na ụwa dum na-ata ahụhụ kwa ụbọchị.
Kedu ihe na -esi na okpomoku zuru ụwa ọnụ apụta?
Ihe si na mmụba nke okpomọkụ ụwa na -emetụta ụwa niile ma ọ bụ obere ma ọ bụ obere. Dị ka ọmụmaatụ:
Na Spain a na -ahụta na ebili mmiri na -adịwanye ugboro ugboro, na -adịte aka ma sie ike. Na -alaghachighị azụ n'oge, na Ọgọst 14, 2021, obodo Cordovan nke Montoro meriri oke akụkọ ihe mere eme ya, yana 47,2ºC, n'oge ihe ọkụ ọkụ nke were ọtụtụ ụbọchị.
Mmụba nke oke osimiri ga -amanye anyị ịgbanwe ụzọ n'ọtụtụ ebe. Dịka ọmụmaatụ, osimiri nwere ike furu efu, ịghara ịkọ maka iyi egwu ọ ga -ewetara ndị niile bi n'ụsọ osimiri.
Ihe obibi gburugburu ebe obibi ga -agbanwe. Nke a n'ezie bụ ihe a na -ahụ anya: osisi ndị na -eguzogide oke okpomọkụ na oke ọkọchị na -anọchi nke dị obere.
Glaciers na -agbaze, na -enye aka na ịrị elu nke oke osimiri.
Ụmụ anụmanụ na -ala n'iyi ngwa ngwa. Agbanyeghị na ebe a anyị nwekwara ike ikwu maka ịchụ anụ, enwere ọtụtụ anụmanụ, dị ka anụ ọhịa bea nke na -enwewanye ihe isi ike ijide anụ ha, ebe ice na -agbaze tupu oge ya eruo.
Nri nwere ike ịdị ọnụ karịa. Osisi na -adabere na ihu igwe na -eto eto nakwa imepụta mkpụrụ ha, yabụ ọ bụrụ na ọnọdụ agbanwee, ọ ga -esikwu ike inweta akwụkwọ nri, ọka na / ma ọ bụ akwụkwọ nri.
Dịka ị pụrụ ịhụ, okpomoku zuru ụwa ọnụ bụ nnukwu nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ihe na-akpata okpomoku zuru ụwa ọnụ
Rolando Escudero Vidal bụ onye ndu dijo
Na-azọrọ nke Mgbanwe Ọdịdị Nchigharị nke ikuku na njikwa
Onye edemede Rolando Escudero Vidal
Echere m na oge eruola ikwu maka Pneumoponics. Na mberede, ụbọchị m guru. Achọghị m na mgbe ọ bụ naanị uzuzu ikuku, m na-akwa ụta na ekwughị m ya, na-ahụ ka ụmụ mmadụ na-ata ahụhụ na okpomoku ụwa. Chọpụta, ụfọdụ ga-asị na m na-ekwu nzuzu. Onye ọ bụla nwere ikike ikwu uche ya. Ma, ọ ga-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ha gosiri m na m na-ekwu nzuzu. Ọ bụrụ otu a, na mberede, a na m amata ihe n’eme ka m kwuo nzuzu. Mgbe ahụ enwere m ike ikele gị. Mana, na ihe akaebe bụ ihe ezi uche dị na ya, na ọ nwere ezigbo ntọala.
Gịnị bụ oyi baa? Pneumoponics bụ usoro, sistemụ nwere osisi na-eri nri, ya bụ, akwụkwọ nri, ikuku site na mgbọrọgwụ. Ọ nwere ike na-akpọ ya mepụtara. Kedu nke etinyegoro na INDECOPI, na njedebe nke afọ 2014. Ọ bụ usoro gosipụtara n'ụzọ doro anya na akwụkwọ nri na-eri nri naanị site na mgbọrọgwụ yana epupụta naanị na-achụpụ gas ndị emepụtara n'ime osisi ahụ, n'ihi nsonaazụ usoro kemịkalụ nke mee n'ime ha. Otu n’ime ikuku ndị ahụ, na nke kachasị ukwuu, bụ oxygen. Usoro a, etinyere ya n'ọtụtụ, nwere ike idozi okpomoku ụwa n'ụzọ dị nfe. Na, ọ bụghị naanị dozie nsogbu ahụ, kamakwa ọ nwere ike inyere mmadụ aka ịchịkwa ikuku, melite ọrụ ugbo, wdg. Ebe ọ bụ na akwụkwọ nri na-eji ọtụtụ ụdị gas eme nri. Ikekwe ụdị gas niile dị na mbara igwe.
Gịnị bụ ihe a mepụtara? Nchọpụta a sitere na The Radicular Theory, nke akpọrọ akwụkwọ akpọrọ Project of Reconversion and Control of the Atmospheric Equilibrium, nke Rolando Escudero Vidal dere. Ozizi a gbadoro ụkwụ n’ọtụtụ ihe na ihe ndị enwere ike ihu na okike. Ozizi a na-ekwu na akwụkwọ nri na-eri nri site na mgbọrọgwụ. Na epupụta na-arụ ọrụ naanị ịchụpụ gas ndị sitere na usoro kemịkalụ na-eme n'ime.
Mana ebumnuche bụ isi nke oru a bụ iji dozie nsogbu ikuku nke metụtara mmadụ. Maka nke a, na ụbọchị mbụ nke Machị, obodo Peruvian mere ka ọ mara ya, na-ebuga olu nke nchịkọta La Neumoponia n'ụlọ gọọmentị, n'aha Onye isi ala nke Republic. Mpịakọta dị na aha Mịnịsta nke ministri ndị a: Mịnịstrị nke Gburugburu Ebe Obibi, Mịnịstrị nke Ugbo, Mịnịstrị nke Ọchịchị, Mịnịstrị nke Ofesi, wdg. Ọzọkwa na Congress nke Republic, n'aha Onye isi oche nke Congress, Oriakụ Ana María Solórzano, bụ onye, ​​dị ka La Primera si kwuo, nwere obiọma iji kwuo ụfọdụ okwu na nke a. E nyekwara otu olu na Mahadum Agrarian.
Zaghachi Rolando Escudero Vidal
Kedu ihe ga-esi na okpomoku ụwa pụta? Ọtụtụ ma dị ezigbo njọ. A ghaghị iburu n'uche na ọtụtụ carbon dioxide na-agbakọta na ikuku. Nke a gas nwere carbon. Carbon na-ekpokọta okpomọkụ ma na-ebunye ya gburugburu ya, ma ọ bụrụ na ikuku ahụ ọ bụ ụwa. Mgbe ihe na-ewe iwe ọ na-agbasa ma mgbe ọ na-amụba ọ na-ada mbà. Na nke ugbu a, eriri ala na-ekpo ọkụ. Ya mere, ọ na-agbasa. Ma ọ bụrụ na ọ na-agbasa, ọ na-ada.
Ihe si na usoro a pụta bụ mgbawa ndị na-apụta n'ọtụtụ ebe. Otu n'ime ebe ndị ahụ bụ ezigbo Callejón de Conchucos. Onye ozo nke metutara obodo Piscobamba, Socosbamba wdg. Naanị ihe ga-eme, ọ dị nwute, ịhapụ ebe ahụ. Enweghị ọzọ. Ma eleghị anya, ebe ndị a nwere nanị otu afọ iji bie.
Ekwenyere m, nke a nwere ike ịbụ usoro na - esote hydroponics na aeroponics, nke na - aga nke ọma ugbu a dịka ụzọ esi arụ ọrụ ugbo. Onwe m, ekwenyere m na ụmụ mmadụ achọpụtalarị mmebi nke a ga - emezigharị "site na ịchọ ụzọ ọzọ dị iche iche, na - echefughị ​​na osisi bụ mmalite nke mmepụta ume na biosphere.
daalụ ma hụ gị n'oge na-adịghị anya
Zaghachi francisco Garcia
Enwere ọtụtụ ihe na-akpata okpomoku ụwa, ọtụtụ nsogbu n'ihi okpomoku ụwa, ọtụtụ mmadụ nwere ike ịnwụ, okporo osisi na-agbaze, enwere ike inwe ọtụtụ idei mmiri, n'ihi na ndị mmadụ anaghị eche ihe nwere ike ime.
Ndị mmadụ anaghị eche na ha anaghị etinye ihe dị mkpa mkpa maka ihe nwere ike ime mgbe ọdachi dakwasịrị, Chukwu ekwela, ha ga-amata ihe ọ bụghị inye ụwa mkpa
Zaghachi ka enrique jr
haha nke ahụ bụ eziokwu.
Nitrogen na oxygen dị na ikuku na ihu igwe na-ekpo ọkụ nke ukwuu (maka ihe atụ AIRCRAFT ENGINES), ka a gbanwere n'ime oxide nitrous, nke na-emetụta ozone, na-arụ ọrụ nke radieshon nke ihe na-erughị 0,31 micrometers, na-eduga na mmebi nke ozone oyi akwa.
Kedu ihe kpatara na ekwughi aha ọtụtụ nde ụgbọ elu kwa afọ? Mr ego bụ nwoke dị ike !.
ndị mmadụ dị nzuzu na oge ọ bụla idei mmiri mere n'ihi okpomoku ụwa m nwere ike ịsị m ndo
Ihe doro anya bụ na ọ bụ nsogbu na nso nso a ga - emesị metụta anyị niile. Ọ gwụla ma ewepụrụ usoro dị irè iji zere ya, n'ezie.
Okwu nke okpomoku zuru ụwa ọnụ, ọtụtụ n'ime anyị na-echegbu onwe ha dịka enwere ihe ndị metụtara na-emetụta ikuku, agbanyeghị na anyị anaghị eme ihe ọ bụla, ọ dị mkpa na ọha mmadụ, ndị gọọmentị na ndị na-abụghị ndị gọọmentị, ndị ọchụnta ego, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na onye ọ bụla chọrọ ịkwụsị ma ọ bụ mebie nsogbu ndị a anyị na-eche ihu, ka anyị bido mkpọsa nke na-eme ka a mata banyere nlekọta na nchedo gburugburu ebe obibi wee zere ọtụtụ ọrịa na-efe efe, ọrịa na ọnụnọ mgbanwe carbon dioxide.
Zaghachi Agustín Chávez
Akwadoro m akwụkwọ akụkọ COWSPIRACY iji mepee mkparịta ụka na-atọ ụtọ n'okwu a, n'ihi na dị ka akwụkwọ akụkọ ahụ si kwuo, isi ihe na-akpata okpomoku zuru ụwa ọnụ bụ ibu ọrụ nke anụ ụlọ kpọmkwem, nke metụtara ihe ọ bụla na-erughị ụzọ anyị si eri nri. Ihe kpatara ya dị mfe: iri anụ chọrọ nnukwu ojiji nke akụ ma ọ bụrụ na ịlele menu ụlọ oriri na ọ ,ụ anyụ ọ bụla, ị ga-enweta oke anụ ahụ. Nke a bụ ihe anyị na-amaghị nke ọma, na inye onyinye ọ bụla, imirikiti mmadụ ga-agbanwe mgbanwe n'usoro ihe oriri ha na ihe dị ka nri, otu n'ime ụdị ụtọ kachasị. Nyochaa isiokwu a, na-abụghị ezigbo ntụgharị uche nke akwụkwọ m kwuru, ọ bara uru n'echeghị echiche banyere ya. Ọ bụ isiokwu dị nro na nke a na-akpabeghị aka, ebe o doro anya na ndị isi nke ụlọ ọrụ anụ ụlọ nwere nnukwu mmetụta n'okwu ọchịchị n'ụwa niile. Ọ bụ akwụkwọ akụkọ siri ike, nke na-adịghị mma, anyị ga-achọ ka enweghị ntọala, mana na nkenke, ọ na-ekpughe na okwu nke okpomoku zuru uwa kwesiri inwe ozugbo na nkpa mgbanwe di n’aka ndi nile bi n’uwa a, na mgbanwe n’omume obughi n’onu elu kamakwa n’inwe nnukwu mmetuta n’ebe ihe nile gbara anyi gburugburu. Nwere olileanya na ọ masịrị gị ma nwee olile anya na anyị nwere ike ịghọta nke a n'oge. Anyị enweghị ike ịga n'ihu na-eme ihe ọchị nke veganism naanị n'ihi na ụfọdụ na-alụ ọgụ ma na-akpasu iwe, anyị ga-atụle nhọrọ ndị sitere n'okike dị ka ụzọ ndụ nkwanye ùgwù maka ụwa nke nyere anyị ihe niile. Oge erugo inyeghachi mmadụ ihe. Daalụ.
A ghaghi iburu n'uche na otu n'ime isi ihe na-akpata igbukpọsị osisi bụ, na mgbakwunye na anụ ụlọ, ubi mkpụrụ osisi iji kwado ọtụtụ puku mmadụ. You ga-elebara fatịlaịza anya.
Ndị mmadụ bụ ndị mbụ ga-ata ụta maka mmetọ gburugburu ebe obibi n'ihi na ọ dị oke ọkụ, ikuku na-emebi ma ọ bụ anyị na-ebibi ya mgbe anyị gosipụtara oke ọhịa, anyị gbutuo osisi, ọtụtụ anwụrụ ọkụ na-emetụta anyị, wdg.
Usoro niile nke okike na-ahapụ fọdụ, ihe ị ga - eme bụ inye ntụzi aka ahụ foduru.
Chọta ndị omempụ anaghị edozi nsogbu, kama, itinye usoro kwesịrị ekwesị.
Ha na-ekwu na anyị amaghị ihe anyị nwere ruo mgbe anyị hụrụ na ọ furu efu, ya mere ọ ga - eme mgbe mmetọ karịa ụwa, ọtụtụ teknụzụ ga - aba uru ma ọ bụrụ na anyị ejiri onwe anyị chụọ àjà na ụwa anyị enweghị ike ịgbanwe karịa ego na teknụzụ niile. CHINEKE hapuru anyi mbara ala di ka aru anyi ma oburu na anyi akpachapuru anya anyi anya na anyi onwe anyi na ebute oria a na enweghi ike idozi site na nri anyi gha aghaghi inwe amamihe karia ka anyi si ebi ndu anyi marala na anyi anyị ga-awụfu ahihia, anyị agaghị emerụ osimiri na oke osimiri anyị yana ọbụlagodi na anyị na-eme ya maka ebumnuche ego mana onye ọ bụla maara etu ha si akpa agwa ma naanị anyị ga-eme akụkụ nke anyị bụ ime ihe ziri ezi
Zaghachi jorge ventura
Enwere ike idozi nsogbu ọ bụla.
dozie, mana agbanyeghị
ime ihe site na rl Atisal dijo
A na-agbanwe ụwa site na oke nleghara anya na enweghị ihe ọmụma na nchọpụta nke oge enweghị ike igbochi mmebi nke usoro mbara igwe ị kwesịrị ile anya n'elu iji hụ mmeghachi omume n'okpuru nlebara anya niile na elu na elu iji hụ karia ma karia
Zaghachi ka ị mee site na rl Atisal
Kedu CO2 si emebi
O doro anya na CO2 decomposes mgbe coal na-ekpo ọkụ. Ihe ngosi doro anya nke eziokwu a bụ ihe abụọ na-eme na okike: mgbe mmiri gachara, mmiri ozuzo na-ada. Mgbe oge ọkọchị na-abịa ma na-aga, mmiri ozuzo na-abawanye, na-ada nnukwu mmiri ozuzo. Gịnị kpatara nke a? Ihe na-eme bụ na n’oge opupu ihe ubi, ụzarị anyanwụ ka nọ n’ọnọdụ ebe ha ka na-enweghị ike ikpo oke ọkụ. N'aka nke ọzọ, n'oge ọkọchị, ụzarị ọkụ ndị a na-abịa kpọmkwem na mbara igwe ma na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Nke a bụ ihe akaebe na CO2 decomposes na kpo oku, na-enye ikuku oxygen. Mgbe ahụ oxygen na-esonye hydrogen, bara ụba na mbara igwe, na-akpụ mmiri, H2O. Ekem edịm.
Huaycoloro bụ ebe dị na Huarochirí. Ọ bụrụ na aha ya sitere na aha abụọ Kech-huas: huay-ghó na loj-ro, ọ bụ ebe nwere ike ịdị ize ndụ. Huay-ghó bụ ụdị agwọ dị obere, dị gịrịgịrị, ihe dị ka sentimita 30 n’ogologo ma na-erughị milimita 4. Ntughari ya na-adighi ike na ala. Ọ bi n'okpuru ala. Enwere ike kewaa ya abụọ ma akụkụ abụọ ka dị ndụ. Onye ọ bụla na-aga n'ụzọ nke ya ma rute n'okpuru ala ebe ha bi.
Huayco sitere n'aha agwọ a, ya mere, ihe onwunwe ya yiri nke obere agwọ. Maka na ndị bi ebe ndị a kpọrọ aha ebe dịka ihe ha hụrụ. Na huaycos na-agagharị n'ụzọ adịghị njọ, dị ka obere agwọ, ọ bụrụ na ha kewaa ha, ha na-aga n'ihu.
Na ihe na-ekwu "icheku" bụ ihe ewepụtara aha "loj-ro" nke bụ Kech-hua aha nri dị ka ofe, mana nke gbara agba, ngwakọta nke ọtụtụ ihe: akwụkwọ nri, poteto, agwa, anụ, wdg. Huayco mgbe ọ rutere ebe enwere ike ịkwụsị ya na-agbakọta na-etolite ihe yiri nri ahụ e kwuru na mbụ. Site na aha ahụ ka Huaycoloro mụrụ.
Ọ bụrụ na ụzarị ọkụ violet gafere, anyị ga-agba ọkụ ruo mgbe anyị nwụrụ
Zaghachi juan jhair
Kedu ihe nwute mgbe afọ ole na ole gasị anyị ga-anwụ n'ọkụ, ọ bụrụ na anyị emeghị ihe ọ bụla, anyị ga-eme ka ndị mmadụ mata ịkwụsị iji ụlọ ọrụ eme ihe. Gbalịa inyere gburugburu aka aka. Biko ndị enyi, ka anyị gbalịa ịkwụsị nke a tupu oge agafee. anyị nwere ike ịgbatị ndụ mmadụ Biko nyere aka 🙁
Zaghachi Gino Gallo
ị ga-ezere nke a
Ihe na-akpata okpomoku zuru ụwa ọnụ nwere ike ịbụ ọtụtụ. Ma, e nwere usoro nke nwere ike idozi nsogbu ahụ; oru ngo maka nchighari na njikwa nke ihe di n'ime ma obu Pneumoponics.
Ndụ dị na mbara ala mara ezigbo mma ma ọ bụrụ na anyị emebi ya tupu ọdịnihu nke ụmụ ha abịarute, kedu ụwa ha ga-ahapụ ohere maka ya, ọ gaghị enwe ike ị ga, bụ mmadụ, ọ bụghị anụmanụ, ka anyị lekọta ụwa, hey ọbụlagodi ụmụ anụmanụ na-elekọta ha
Zaghachi donais sebastian herrera medina
Kachasị mma… ..
Lucia Nwachukwu dijo
na ndị mmadụ kwụsị ịgha ụgha ma gee ntị na sayensị.
Zaghachi Lucía Paredes
Isi ihe na-akpata okpomoku zuru ụwa ọnụ bụ anụ ụlọ, gas gas sitere na ehi, na stiercol na flatulence, na-emetọ ihe karịa CO2 niile nke mmadụ niile mepụtara, oke oke ọhịa dị mkpa maka ebe ịta nri nke chọrọ ohere na akụrụngwa, iji mepụta obere ...
You chọrọ inye aka igbochi okpomoku ụwa? Erikwala anụ.
M na-akwado ịlele nyocha akwụkwọ akụkọ nke akọwapụtara nke ọma
Zaghachi Moisés Ugido Cedeño
Karịa ịza ajụjụ, Achọrọ m ịjụ ajụjụ. E wezụga ihe ndị edepụtara dị ka mmalite nke okpomoku zuru ụwa ọnụ, ọ ga-ekwe omume na anyị na-abanye na ọnọdụ ihu igwe nke anyị na-enweghị ntụnye akụkọ ihe mere eme? M na-ekwu maka ngagharị nke ụwa, nke nwere okirikiri nke na-adịru ihe dịka afọ 25.000 na n'ezie, n'ihi oge ya, anyị enweghị ntụaka na obere ihu igwe. Dabere na ihe m nụrụ, anyị bụ ihe dịka afọ 12.000 n'ime afọ ice na dabara nke ọma, ọ dabara na oge ọkara usoro ihe nkiri ahụ. O nwere ike ịbụ na anyị na-aga oge nke anyị na-enweghị ntụnye maka ya. Ke ukem, ọ bụ coherent na-eche na, ebe ọ maara na'swa orbit gburugburu anyanwụ bụ n'ezie ellipse, na ngosi site na a mgbanwe a dị n'agbata foci nke ellipse ya mere a mgbanwe ya na na ọ na-egosipụta, ọ bụ ezie mana ọbụghị otu, na mgbanwe ihu igwe a hụrụ?
Zaghachi Alberto Compagnucci
Nke a nyeere m aka nke ukwuu, daalụ, mana enwere nyocha na-ekwu na okpomoku zuru ụwa ọnụ bụ akụkọ ifo na nke a emeworị ugboro 3 yabụ ihe m na-achọ bụ ma ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu?
Zaghachi diego saavedra gonzalez
Kedụ ka m ga - esi jiri ozi a na ọrụ m ma ọ bụ edemede ma ọ bụrụ na enweghị onye edemede ma ọ bụ opekata mpe otu mahadum na - akwado ihe ọmụma a kesara, nke a na - ewute m na ibe weebụ, ebee ka amaokwu ma ọ bụ saịtị nke ndị mere nyocha ma ọ bụ ọrụ ubi, ngụkọta
Echere m na anyị ga-azọpụta ụwa site na ịkwụsị ihe a niile
Ọnye na -bụ Alex Gonzales Herrera? dijo
O zighi ezi, m gaara etinye ya na ndepụta n'ihi na ọ dị ọtụtụ, naanị maka ihe kpatara ya, abanyela na saịtị a, ọ baghị uru
Zaghachi Alex Gonzales Herrera
Ọ dị m ka ọ gara n’agwaghị na ndetu ahụ na otu n’ime ihe na-akpata oke ihe ọjọọ bụ ụlọ ọrụ na-azụ anụ ụlọ, nke na-ebute ikuku ikuku griinụ, karịa na-ere ọkụ ọkụ. Gas ndị anụmanụ na-agbapụta bụ ihe na-akpata gas na-ekpo ọkụ ma ọ bụrụ na anyị ejikọta ya na igbukpọ osisi iji mepụta nri maka ime ka anụ ụlọ maa ụba, mmetụta nke okpomoku ụwa na-amụba.
Zaghachi Camila Osa